ထက်နိုင်ဇော်| February 19, 2013 | Hits:2,293
3 | | ဟံသာဝတီ ကားဝင်းမပြောင်းရွှေ့ရရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် ပြင်ဆင်နေပုံ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
အကြွေး ပြန်မဆပ်နိုင်သည့် မွေး/ရေ လုပ်ငန်းရှင်များကို အရေးယူရန် စီစဉ်နေ
ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ် ဗုံးကွဲမှု သံသယရှိသူ ၁ ဦး ဖမ်းဆီးရမိ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment upauk February 19, 2013 - 11:09 pm	ဟံသာဝတီကားပွဲစားတန်းကိုပြောင်းသင့်ပါတယ်။
Reply	ml February 20, 2013 - 3:50 am	သည်မြေနေရာကို ဘယ်သူပိုင်သလဲ။ ကားပွဲစားတွေ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေက ငွေစု ၀ယ်ထားလို့လား။ တကယ်တော့ ဟိုးတုန်းက ဒါ သင်းချိုင်းမြေ။ လူတွေ နေရဲမှာ မဟုတ်လို့ အိမ်တွေ မဆောက်ပဲ ကားပွဲစားတန်းလုပ်ဆိုပြီး စည်ပင်က သတ်မှတ်ပေးထားတာထင်တယ်။ ဒီလို အလကား သတ်မှတ်ပေးထားတာဆိုရင် သူတို့မှာ ပြောင်းပိုင်ခွင့် ရှိတာပေါ့။ မြို့ပြင် အဝေးကြီးကို ရွှေ့တာ၊ လုံးဝ ပိတ်ပစ်လိုက်တာထက် စာရင် မလှမ်းမကမ်း သီရိမင်္ဂလာဈေးမှာ နေရာအစားပေးတာ တော်သေးတာပေါ့။
Reply	YangonThar February 20, 2013 - 11:05 am	All brokers=liers.Get out from there.Government want to use this place for better city.You guys doing for just you and your family.Democracy is not japanese used cars.You can pkay the price of cars.But,don’t play with democracy.
Reply	angel February 20, 2013 - 1:12 pm	စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကမဟုတ်ရပါဘူးကောလဟာလပါ။ဆိုပြီးဗြောင်လိမ်
Reply	Myochit February 22, 2013 - 12:35 am	မြန်မာပြည်မှာထစ်ခနဲရှိ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတတ်နေကြတယ်။ အမှန်တကယ် အရေး
Reply	Wana February 22, 2013 - 11:57 am	Ko Myo Chit.Good tal byar.I really like your last sentence.